मणिको मुखबाट फुत्किएको बोली कसको ? | जनदिशा
मणिको मुखबाट फुत्किएको बोली कसको ?
Sahas January 30, 2021	No Comments
काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नेपाल सरकारलाई ‘श्री ५ को सरकार’ भनेका छन्। शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका मन्त्री थापाले ‘श्री ५ को सरकार’ भनेका हुन् ।
उनले सम्बोधनको सुरुमा ‘सुर्खेतका जनसमुदायहरूलाई स्वागत गर्दछु’ भने। त्यसपछि थापाले, ‘सबैलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, जो मञ्चमा आसिन हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सुर्खेतका जनसमुदायहरूलाई नेकपा स्थायी कमिटी र श्री ५ को सरकारबाट स्वागत गर्न चाहन्छु,’ भनेका थिए ।
नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका मन्त्री थापाको उक्त अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ। धेरैले ओली सरकारका मन्त्री पनि ओलीजस्तै ‘महाराज; बन्न खोजेको भन्दै व्यंग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आन्दोलनका उपलब्धिहरु उल्त्याउन खोजेको आरोप लागिरहेको छ। ओलीइतरका सबै दल, नागरिक समाज, संघसंस्थालगायत संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलनमा छन्। त्यसैले थापाको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने धेरैको भनाइ छ।
Previous Previous post: वनमन्त्री नै वन तस्कर :नेता रावल
Next Next post: कांग्रेस जिल्लामा पनि विभाजित